सम्पर्कविहन बनेको तारा एयरको जहाज दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला – Nep Stok
जेठ १६, २०७९ सोमबार 147
म्याग्दी, १६ जेठ :
पोखरादेखि जोमसोम जाने क्रममा आइतबार बिहानदेखि सम्पर्कविहीन बनेको तारा एयरको जहाज दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको छ ।
मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका वडा नं २ स्थित पटके लेक सानोसोरा भन्ने ठाउँमा क्षतविक्षत अवस्थामा आज बिहान जहाज भेटिएको हो । थासाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप गौचनले लेतेका सुमित गौचन र यार्सागुम्बा खोज्न गएकाले दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको जहाजको तस्बिर पठाएका जानकारी दिनुभयो । सरकारले यसका बारेमा औपचारिक पुष्टि भने गरेको छैन ।
मानापाथी हिमालको फेदीमा रहेको पहाडमा टुक्राटुक्रा परेको अवस्थामा टाढाबाट जहाज देखिएपछि सुरक्षाकर्मी र स्थानीयवासीको टोली त्यसतर्फ लागेको गाउँपालिका अध्यक्ष गौचनले बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङका प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्रराज पाण्डेले भने सेना, सशस्त्र र प्रहरीको टोली घटनास्थलमा पुगिनसकेकाले औपचारिक पुष्टि भइनसकेको जानकारी दिनुभयो । कोवाङदेखि दुई घण्टा पैदल हिँडेर याकखर्क पुगेर राति त्यहाँ बसेका करिब १०० सुरक्षाकर्मीको टोली आज बिहानै मानापाथी हिमाल आसपासको क्षेत्रतर्फ प्रस्थान गरेको थियो ।
पोखराबाट बिहान ९ः५५ बजे जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको ९ एनएइटी विमान बिहान १०ः०७ बजे जोमसोम विमानस्थलको टावरबाट सम्पर्कविच्छेद भएको थियो । हराएको जहाजमा चालक दलका तीन जना र १९ जना यात्रु रहेका जनाइएको छ ।
Prevतारा एयरको विमान लार्जुङमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटियो, हेलिकप्टर जान नसकेपछि लमार्गबाट सेना र प्रहरी पठाईयो
Nextमतदाता नामावली दर्ता खुल्दै,जहाँ बसोबास छ त्यही नाम दर्ता गर्न मिल्ने
एकैपरिवारका तीन जनाको मृत्यु, पुरै गाउँ नै शोकमा डुब्यो !
एक जना किसानका लागि जब वुद्धले प्रवचन रोक्नुभयो
कतारको रातो सूचीमा नेपाल, कतार जान अब यस्तो नेपालीको लागी नियम !
समिक्षा अधिकारीको पनि अडियो बाहिरियो, त्यो दिन यस्तोसम्म भएको रहेछ : हेर्नुहोस भिडियो सहित (2843)